के हुम्लामा सीमा मिचिएकै हो ?
नागरिकता विहीनहरूले राष्ट्रिय जनगणना बहिष्कार गर्ने
कसले गर्ला कोरोनाका टुहुराको हेरचाह?
मदिरा उत्पादक संघको अध्यक्षमा वावरा निर्वाचित
यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
नन्दप्रसादलाई न्याय खोई?
संस्कृतिका नाममा थोत्रा चलन कहिलेसम्म बोक्ने?
‘ओलीले गर्दा एमाले फुट्यो, नयाँ पार्टीको लक्ष्यः वैज्ञानिक समाजवाद’
पूर्ण पी राई
प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा ढुंगो मात्र होइन ‘खुवालुङ’! जल यातायातका लागि किराँती समुदायको आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ फुटाउने कुराले सांस्कृतिक मर्ममा प्रहार गरेका कारण विकल्पको खोजी हुनुपर्छ।
कसको भाष्य हो ‘हम आब सीता नै बनबौ’ ? लैंगिक असमानताका साथै जातको दर्जाबन्दीले ‘गुलामको पनि गुलाम’ नियतिमा बाँचिरहेका बहुजन महिलाको स्वतन्त्रता पितृसत्ताको विनाशबाट मात्र सम्भव छैन।
मार्क्सलाई आफ्नै उत्तराधिकारीबाट सबैभन्दा बढी संकट छ मार्क्सवादलाई धर्मग्रन्थ होइन, नयाँ वैकल्पिक विचारको दर्शन मानेर राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेमा मात्र साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट पार्टी जीवित र चलायमान हुन सक्छ।
कोभिड-१९ ले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के प्रभाव पार्‍यो? के सिकायो? विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ को प्रभावबारे नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति, सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे भएका बहस र समग्रमा विद्यालय शिक्षामा परेको प्रभावबारे विश्लेषण:
नेकपाबारे सर्वोच्चको फैसलाका बाछिटा सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएसँगै केहीलाई राहत दिएको छ भने कसैलाई आहत बनाएको छ।
महिला मुक्तिको लागि कस्तो विचार र रणनीति ? महिला सम्बन्धी पूँजीवादी विकृत अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि उत्पीडित र श्रमजीवी महिला आन्दोलनको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
किन हुँदैन संविधानको ‘बलात्कार र चीरहरण?’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रतिगमन भन्ने नागरिक अगुवा समेतले बारम्बार ‘संविधानको बलात्कार’ र ‘संविधानको चीरहरण’ जस्ता शब्दको प्रयोगले लैंगिकताप्रति संवेदनशील र विशेषगरी महिलाको मन चसक्क दुःखेको छ।
नारी स्वरलाई सलाम ! जबसम्म नारी स्वरलाई सम्मानका साथ सुनिँदैन, तबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन। र, जबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन, देशको शिर उँचो हुन सक्दैन।
अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने महिला आयोग किन भयो कमजोर? पर्याप्त अधिकार नदिने र पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता/विज्ञता नहेरी राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा छनोट गर्ने प्रवृत्तिले महिला आयोगको औचित्य पुष्टि हुन गाह्रो परिरहेको छ।
सुनको जलहरीमा आडम्बरी झलक देश र जनतालाई आपत् पर्दा खर्च गर्न सकिने पशुपतिको आफ्नै ढुकुटी छ। त्यहि कोषबाट प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास मोचन गरेका थिए। तर, अहिले कोरोना महामारीको बेला उल्टै राज्यलाई भार पर्ने गरी शिवलिङ्गमा परम्परा विपरीत सुनको जलहरी राखिएको छ।
नेकपा एकताको लागि यस्तो हुनसक्छ विकल्प प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भन्ने पुष्टि भएपछि अब त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। यस्तै, पार्टीभित्रको संघर्षका कारण एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने पक्षले पनि आफूलाई कसरी सच्याउने हो, त्यहाँ पनि आत्मालोचनाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्‍यो।
सर्वोच्चको फैसलापछि कस्तो छ सरकार निर्माणको प्रक्रिया ? राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउका रूपमा हेरिन्छ वा साबिककै प्रधानमन्त्रीका रूपमा, यसका आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
सर्वोच्चबाट संविधानको ‘गुड डे’को पर्खाइ नेपालको सात दशक लामो लिखित संविधानको परम्परामा सर्वोच्च अदालतले न्यायको निरूपण गर्दा अक्सर संविधानको मर्यादा राखेको गर्विलो इतिहास हेर्दा संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाबाट आफ्नो संस्थागत निष्ठा अझ बढाउने आम अपेक्षा छ।
लौठसल्लाको नाममा के छ हजुर? लौठसल्लाको ‘ट्याक्सस माइरेई’ प्रजाति नेपालमा रहे–नरहेको बारे विज्ञहरूको विवादले सर्वसाधारण किसानको जीविकोपार्जनमा असर पारेको त छ नै, यो प्रजातिकै भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ।
रत्‍नाकरको बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली जनता र उनकै दल नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वाल्मीकि बन्ने सुवर्ण अवसर दिए। परन्तु, उनी अन्तिमसम्म पनि रत्नाकरको भेषमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका छन्।
ओली-गफका तीन वर्ष कामभन्दा बढी तामझाममा रमाउने प्रम केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको तीन वर्षमा सरकारका कार्यक्रम जति प्रचारात्मक देखिए, त्यति परिणाममुखी भएनन्।
झाँक्री पक्राउको झापड संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हकमाथि सरकारको प्रहार र प्रतिशोधपूर्ण कार्यले प्रतिगमनको उल्टो सुई सुल्टो दिशामा घुमाउन प्रयत्नशील रामकुमारी झाँक्री जस्ता जुझारू युवा नेताको मनोबल थप बढाएको छ भने सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ।
यसकारण आवश्यक छ कृषिमा वैदेशिक लगानी सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाटो खोल्ने निर्णय गर्दा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ। यसकारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न आफैँ सक्षम हो वा बाहिरको प्रविधि र सीपभन्दा उत्पादन नै ल्याएर बिचौलियाको भूमिकामै रमाउन चाहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भएको छ।
भीड मार्फत ओलीका भ्रम भ्रम र मिथ्याको घोडामा चाबुक हान्दै एउटा दु:खान्त राजनीतिक दुर्घटना सन्निकट केपी ओलीका रवैया निभ्नुअघिको प्रदीप्त दियो समान हो।
यसरी हुँदै छ विकासका नाममा उपत्यकाका पोखरीहरूको विनाश काठमाडौँ उपत्यकाका पोखरी मासेर भौतिक संरचना ठड्याउने काम राणाकालबाटै शुरु भएको हो। कुन पोखरी मासेर के संरचना बनाइए भन्ने सूची लामै हुन्छ। यसरी विनाश गर्दा ‘सार्वजनिक हित’ को नाम दिँदै विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन जस्ता संरचना बनाइने गरिन्छ।
जलवायु परिवर्तन बुझ्न अंग्रेजी जान्नै पर्ने हो ? जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी शहर केन्द्रित र अंग्रेजी भाषाका जानकारप्रति लक्षित छ। अंग्रेजी भाषाका सामग्रीले यो विषय बुझ्न धेरै मद्दत गर्छन्, तर ती सामग्री नेपालका धेरैजसो मानिसका पहुँचमा छैन। नेपाली भाषाका सामग्रीमा स्थानीय चासोका विषय वातावरण, कृषि, वन, प्राकृतिक प्रकोप आदिबारे धेरै जानकारी पाइन्छ। तर, त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी भने कम पाइन्छ।
आफू सत्य, बाँकी तमासे ! अहिले प्रधानमन्त्री ओली र उनका ‘साइबर सेना’हरू फरक विचार राख्नेहरू प्रति यति असहिष्णु बनेका छन् कि उनीहरू आफूलाई मात्र सत्य र बाँकीलाई तमासे ठानिरहेका छन् । तर, वास्तविक तमासेबाज त उनीहरू स्वयं हुन् ।
न लावण्य देश थियो, न राजा नवराज स्वस्थानी र यस्तै अन्य कथाहरुमा उल्लेख हुने देश, समाज, राजा तथा घटना विवरणलाई इतिहासकै रुपमा ग्रहण गर्नु हाम्रो इतिहासचेतको अभाव हो ।
रोकिएन क्यान्सरको औषधि लौठसल्लामाथि वनस्पति विभागको ‘ताण्डव नृत्य’ संसारमै पहिलोपटक नेपालबाटै रेकर्ड गरिएको लौठसल्लाको प्रजाति ट्याक्सस् माइरेई अहिले भए, नभएको बारे सरकारी अधिकारकै फरक मतका कारण क्यान्सरको औषधिमा उपयोगी यो वनस्पतिको खेती गर्ने किसान मात्र होइन वनस्पति विज्ञानका विद्यार्थीसमेत अन्योलमा परेका छन् ।
विद्यासुन्दरकाे सम्पदा संहार नेपालमण्डलका रैथाने नेवार विद्यासुन्दर शाक्य आस्था अनि आनुवांशिक रूपमै सम्पदाको संरक्षक हुनुपर्ने हो। हाम्रा सामु यस्तो रणमैदान गोचर हुनु पर्ने थियो, जसमा एकातिर शाक्य सम्पदा संरक्षणनिम्ति अर्कोतिर भूमाफिया, जलमाफिया, ठेकेदार र बिचौलिया पौठेजोरी खेलिरहेका हुन्। बिडम्बना, अहिले शाक्य सम्पदा भक्षक र रैथाने नगरवासी सम्पदा रक्षकको रस्साकस्सीमा छन्।
बाहुनवादको विरोध, अवसरवादलाई निम्तो समुदायभित्रका अगुवाहरूमा व्याप्त ‘बाहुनवादी’ प्रवृत्तिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई धरासायी बनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन : यी हुन् संविधानका दरार र त्रुटि संसदीय मान्यता प्रतिकुल संसद विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कतै छैन, जुन नेपालको संविधानको ‘गहिरो दरार’ हो। यहीकारण धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली र धारा ७५ एवं धारा ७६ (७) बीच बनेको खाडल सिद्धान्तले पुर्न सक्तैन।
‘नेकपाका दुवै समूह विभाजनको अपजस लिन तयार देखिएनन्’ कुनैपनि दलले जहाँ अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ, त्यही नै दल हुन्छ भन्नु नै दल विभाजनको आधार तयार गर्नु हो। दलको विधानको व्यवस्थाले केही महत्व राख्न सक्दछ। तर, हामीले बुझ्ने भनेको सार्वजनिक रूपमा जारी भएको कानून हो।
सडकबाटै संविधानवाद प्रधानमन्त्री ओली संविधानको रक्षक नभएर भक्षक सावित भइसकेका छन्। त्यसैले नागरिक तप्काको मुख्य चिन्ता ओली रहनु वा जानु होइन, संविधानको रक्षा अर्थात् संविधानवाद हो।
नागरिकता विहीनहरूले राष्ट्रिय जनगणना बहिष्कार गर्ने नागरिकता विहीन नेपालीहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नन्दप्रसादलाई न्याय खोई? छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका वेला ६ असोज २०७१ मा ज्यान गएका गोरखा, फुजेल गाउँ–७ का नन्दप्रसाद अधिकारीको शवको अझै अन्तिम संस्कार हुनसकेको छैन।
‘ओलीले गर्दा एमाले फुट्यो, नयाँ पार्टीको लक्ष्यः वैज्ञानिक समाजवाद’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा ५ असोजमा काठमाडौंमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव:
हुम्लामा रहेको भनिएको सीमा समस्या समाधानमा नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
किन हुन्छ चीनको हाईहाई?
नेपालमा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा उठ्ने बित्तिकै वास्तविकता नबुझी सरकारी अधिकारीहरू नै आरोप मिथ्या भन्दै शुरूमै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। एक चीन नीति भन्दैमा अलोकतान्त्रिक कुरालाई पनि नेपालले स्विकार्नु जरुरी छैन।
एमालेले हठ त्यागेर संसद् चल्न दिनुपर्छ
सभामुखले हामीमाथि विभेद गरे भनेर एमालेले राजनीतिक तवरले भन्न पाउँछ, तर १४ सांसदको कारबाही सम्बन्धी निर्णय खारेज गर वा राजीनामा देऊ भन्न पाउँदैन।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघको नवौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
एशियाली विकास ब्यांकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।